မြကျောက်စေတီတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
မြကျောက်စေတီတော်သည် တရားဝင် အမည်မှာ အတုလာမဟာမြကျောက်စေတီတော် ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျီကုန်းရွာအရှေ့ဘက်၊ ရန်ကင်းတောင် အနောက်ဘက် မန္တလေး-ရန်ကင်းတောင်ကားလမ်း မြောက်ဘက် ၅ ဖာလုံခန့်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မှာ မြကျောက်ဆရာတော် ဦးခေမာစာရ ဖြစ်ပြီး၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၂ တွင် မဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ဆက်ကပ်ခြင်း ခံရသည်။
မြကျောက်စေတီကို တည်ရန် မူလပထမ ရည်ရွယ်သူမှာ မင်းတုန်းမင်းကြီး ဖြစ်ပြီး မြေဝင်ငါးတောင်တမိုက်၊ အချင်း သံတောင် ၃၇၁ မိုက် လက်လေးသစ်၊ အမြင့် ချယားသီးတိုင်အောင် ၂၅၆ တောင် ၂ မိုက် ရှိ စေတီတော်ကို တည်ရန် ဖြစ်သည်။ ဘဝရှင် မင်းတရားကြီးသည် အတုလမဟာ မြကျောက်စေတီတော်ကြီး၏ အတွင်း၌ သယံဇာတကျောက်မျက်များအပြင် သစ်ဆိမ့်ကြီးကျေးရွာ ဇေတဝန်ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓါစာရ၏ အိပ်မက်အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ဟန်လင်းကြီးကျေးရွာအနီး ထူပါရုံ အမည်ရှိ စေတီပျက်တဆူအတွင်းမှ ဌာပနာ တူးဖော်ရရှိသော ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်မွေတော်များကို ၁၂၃၉ ခု သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၄ ရက်တွင် စတင်ဌာပနာတော်မူသည်။ ၁၂၄၀ ပြည့်နှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်းတွင် မင်းတုန်းမင်း နတ်ရွာစံရာ စေတီကြီး အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့၍ သီပေါမင်းက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာ ဖိနပ်တော် လူတရပ်နီးပါးထိ ကျောက်စီနိုင်ခဲ့ပြီးမှ ၁၂၄၇ တွင် ပါတော်မူလေ၍ အပြီးမသတ်နိုင် ဖြစ်ပြန်သည်။ ရန်ကင်းတောင်-မန္တလေးကားလမ်း ဖောက်လုပ်စဉ် လူတရပ်ရှိ စေတီဖိနပ်တော်မှ ကျောက်များကို ဖြိုဖျက်ယူငင်၍ လမ်းခင်းခဲ့သည်။ ခေတ်ကာလ မငြိမ်သက်စဉ် ဌာပနာတိုက်ကို မသမာသူများ လာရောက်တူးဖော်ရာ ထန်းပင်လုံးခန့် ရေထွက်ပေါက်မှ ရေများနှင့် မြွေကြီးများ ပန်းထွက်လာသဖြင့် ဌာပနာတိုက်သူခိုးများ ကုန်းပေါ် အသည်းအသန် တက်ပြေးရသည်။ နောင်ခေတ်အဆက်ဆက် ကြာအောင်ပင် အတုလမဟာမြကျောက်စေတီကို သာသနာပြုရန် မည်သူမျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြချေ။
သက္ကရာဇ် ၁၃၅၃ ဝါဆိုလဆန်း ၁၃ ရက်တွင် ရန်ကင်းတောင်ပိုင်ဆရာတော်ကြီး ဦးကုသလ၏ တာဝန်လွှဲအပ်ခြင်းနှင့် မြိတ်မြို့ ဘုရားကိုးဆူကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးဉာဏောဘာသ၏ ခွင့်ပြုချက် ရခြင်းကြောင့် ဆရာတော် ဦးခေမာစာရသည် စေတီတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်တွင် အတုလမဟာမြကျောက်စေတီတော် တည်မည့် နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ သီတင်းသုံးသည်။ ထို့နောက် မြကျောက်စေတီပရိဝုဏ်မှ ကားလမ်းမကြီးအထိ လမ်းဖောက်ခြင်း၊ ပြာသိုလပြည့်နေ့တွင် ဂန္ဓကုဋိတိုက်သို့ "မဟာအတုလ လာဘမုနိ" ရုပ်ပွားတော် ပင့်ဆောင်ခြင်း၊ မြကျောက်စေတီ ဖိနပ်တော် ချိုင့်ဝှမ်းကြီးကို ရေစုပ်ထုတ်ခြင်း၊ ရွှံ့ညွှန်များ ဆယ်ခြင်း၊ ၁၃၅၃ ခု တပို့တွဲလပြည့်တွင် ကျောက်ပန္နက် ရိုက်ခြင်း၊ ချိုင့်ဝှမ်းကြီးအတွင်း ကျောက်ကားပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်နှင့် မြေကားပေါင်း ၄၀၀ ကျော် ဖို့ခြင်းတို့ကို ပြုတော်မူရာ၊ မကြာမြင့်မီ မြကျောက်ပရိဝုဏ်အတွင်းတွင် သာသနိက အဆောက်အဦများ၊ မဟာသိမ်တော်ကြီးနှင့် နှစ်ထပ်ဓမ္မာရုံကျောင်းတော်ကြီးအပြင် မြကျောက်သဘာဝရေသန့်စည်များ တင်ထားရန် အဆောက်အဦတို့ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
ရောဂါဘယ ပျောက်ကင်းသည်ဟု ထင်ရှားကျော်ကြားသော မြကျောက်ရေကို ရယူလိုမှုကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးများ မပြတ် လာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်။
↑ ဦးသိန်းထွန်းကြည် (ဇူလိုင်၊ ၂၀၀၁). ကျေးဇူးရှင်မြကျောက်ဆရာတော်ဦးခေမာစာရ၏ မြကျောက်သောက်ရေသန့်နှင့် ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ. နက္ခတ္တရောင်ခြည်, ၁၃။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြကျောက်စေတီတော်&oldid=388948" မှ ရယူရန်
၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၄:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇၊ ၀၄:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။